Sling TV vs YouTube TV - Iza no Serivisy mivantana indrindra? - Fialam-Boly
Sling TV vs YouTube TV - Iza no Serivisy mivantana indrindra?
Mety ho fantatrao ilay foto-kevitry ny ‘fanapahana ny tadim-pahefana’ nopihan'ny serivisy streaming maro mpamatsy. Marina indrindra izany ho an'ny IPTV fitaovana manohana toy ny Fire Stick sy Roku. Toy izany koa, ireo fahitalavitra mahira-tsaina dia nanampy bebe kokoa tamin'ny fanapahana tadim-poitra.
Izany rehetra izany dia nitondra revolisiona tamin'ny fahitalavitra tariby. Tsy misy olona te hanana fifandraisana satelita na tariby intsony. Misy atiny fialamboly loatra azo alaina ao amin'ny Internet. Amin'ity fitrandrahana ity, fampiharana roa mahatsikaritra no misy lafiny roa: Sling TV sy YouTube TV.
Sling TV vs TV YouTube - Topimaso fohy
YouTube TV dia mpamatsy votoaty kilasy premium izay hita mibaribary manerana an'i Etazonia. Sehatra tena tsara misy fantsona premium 65 mahery, fampielezam-peo eo an-toerana, ary maro hafa. Tsy misy fomba mety hahadiso anao amin'ny YouTube raha mila traikefa mivantana amin'ny fahita lavitra amin'ny TV ianao.
Amin'ny lafiny iray hafa, ny Sling TV dia mijoro ho safidy mety indrindra amin'ny teti-bola ho an'ny olona maniry fialamboly. Tsy manana fantsona malaza be izy io, ary tsy mitondra fampielezam-peo eo an-toerana ihany koa, fa manana sandam-bola be izy io. Ny tena zava-dehibe dia mitondra anao ny fahafaha-misafidy sy ampanjifaina fantsona. Betsaka ny fantsona malaza mbola azonao amin'ny Sling TV.
Amin'ny ankapobeny, hitanao izany TV YouTube dia ho an'ny fialamboly kilasy premium raha toa kosa ny Sling TV mitondra anao safidy safidy mora vidy kokoa miaraka amin'ny fialamboly mandalo.
Chat amin'ny fampitahana haingana
Alohan'ny handehanantsika amin'ny fampitahana dia ity misy tabilao fampitahana haingana hanampy anao hanapa-kevitra. Raha tsy te-handany fotoana hamakiana ny famerenana feno ianao dia tokony ho ampy izany
TV manidina TV YouTube
Mahafa-po tokoa amin'ny alàlan'ny fahalalahan'ny add-ons
DRV 10 ora tsy misy sarany fanampiny
Ny fifanarahana mahazatra dia tsy mandeha amin'ny console lalao
Fantsona 50+ eo ho eo no tsara indrindra
Tsy manohana fantsona eo an-toerana
Ny famandrihana mahazatra dia miasa amin'ny efijery tokana
Atiny 720P mahazatra
Toro lalana mora
Tsy manolotra fantsona premium betsaka
Manolotra serivisy maimaimpoana
Famandrihana premium fonosana tokana
DVR rahona tsy voafetra
Mifanaraka amin'ny rehetra
Fantsona manodidina ny 85+ miaraka amina fonosana feno
Manohana fantsona eo an-toerana
Mandrosoa miaraka amin'ny efijery telo
Votoatiny sy horonan-tsary miorina amin'ny fangatahana
Afaka manampy fantsona premium bebe kokoa ianao
Tsy manolotra serivisy maimaimpoana
Fampitahana tsara indrindra
1. Interface sy traikefa an'ny mpampiasa
YouTube dia sehatra streaming mivantana voalohany izay nandalo fivoarana an-taonany maro. Saika sarotra ny maka sary an-tsaina fa ny olon-drehetra dia afaka mampifanaraka ny fampiasa amin'ny mpampiasa sy ny fampiasana azy mora foana. Mahafinaritra ilay tolo-kevitra ary tsio-drivotra mahery ny zava-niainan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny. Niasa tamim-pahazotoana izy mba hitondrana izany fampiononana izany amin'ny fahitalavitra YouTube.
Midika ve izany fa resy ny Sling TV? Tsia mihitsy! Mahagaga ihany fa ny Sling TV dia iray amin'ireo rindrambaiko mora ampiasaina indrindra amin'ny Internet. Mahatalanjona tokoa izany amin'ny fahitalavitra YouTube amin'ny fampiasana azy mora foana, fivezivezena, fisafidianana, streaming ary maro hafa. Sling TV dia mety loatra ka nihoatra ny fampiharana premium hafa marobe toy ny Hulu TV.
Ny torolàlana fantsona iray dia mahazo aina amin'ireo sehatra roa ireo. Tsy misy ady hevitra ao na iray amin'ireo. Ka amin'ity lafiny ity, ny traikefan'ny mpampiasa, ny interface, ary ny fampiasana azy mora ampiasaina dia afaka mametraka ny Sling TV sy ny YouTube TV amin'ny 'fatorana.'
2. Kalitaon'ny atiny sy fangatahana horonantsary
Sling TV dia mitondra horonan-tsary arakaraka ny fangatahana mitovy amin'ny fampiharana fahitalavitra mivantana mahazatra izay tsy misy atiny ‘tena izy’ na ‘avo lenta’. Mahazo sarimihetsika ianao amin'ny fangatahana raha manaitra ny sambonao izany. Izy io dia manohana ny streaming HD ary inona koa, fa azo antoka fa tsy afaka mifanitsy amin'ny fahitalavitra YouTube amin'ity lafiny ity.
YouTube TV dia mitondra anao atiny voalohany ao amin'ny YouTube, toa an'i Wayne sy andian-tantara mahasarika maro hafa. Na izany aza, ny YouTube dia efa nivarotra ny zon'ny Cobra Kai tamin'i Netflix. Ka afaka manantena fanovana atiny sasany eto amintsika koa isika.
Ireo sehatra roa ireo dia manolotra HD 720P izay tsy mahomby amin'ny fampiharana streaming hafa fa mifamatotra. Mahazo dokambarotra amin'ireo sehatra roa ireo ianao rehefa mitondra anao amin'ny fahitalavitra mivantana, ary ireo fantsona ireo dia hampiseho ny varotra ataony. Tsy misy vahaolana ho an'ireo dokambarotra ireo, afa-tsy ny DVR.
3. Famandrihana, fitsapana ary efijery
Raha miresaka momba ny fotoam-pitsarana aloha ianao, ny YouTube TV dia mitondra anao fitsapana hafitoana handinihana raha toa ka serivisy mety aminao io. Eo am-piandohana, ny Sling TV dia afaka mampiasa serivisy voafetra amin'ny fantsona voafetra. Raha te-hitsapa ny serivisy ‘premium’ ianao, dia afaka mahazo fitsarana mandritra ny telo andro.
Raha ampitahaina dia mitaky famandrihana aorian'ny fitsapana ny YouTube mba hidiranao amin'ny fialamboly. Ka raha mila serivisy ‘maimaim-poana’ ianao dia miasa miaraka amin'ny dokam-barotra ny Sling TV, na dia tsy maintsy ihodivana aza ny YouTube TV.
YouTube dia manana fonosana famandrihana tokana izay manome anao fizarana efijery telo, fidirana amin'ny cloud DVR, ny fantsona rehetra, ny video-on-demand, ary ny zavatra hafa rehetra. Tsy mila miahiahy momba ny fetran'ny fonosana ianao. Noho izany, safidy tsara sy malefaka izy io.
Mandritra izany fotoana izany dia manana famandrihana Orange sy Blue ny Sling TV. Azonao atao ny mampifangaro ny roa amin'ireto famandrihana ireto hahazoana fidirana amin'ny fantsona maro samihafa. Na izany aza, tsy misy Blue, dia tsy hahazo efijery fanampiny ianao fa iray. Toy izany koa, raha mila DVR sy serivisy hafa ianao dia tsy maintsy mandoa vola fanampiny.
Raha te-hanampy fantsona bebe kokoa ianao dia mila mandoa vola fanampiny ianao. Raha mandoa vola hatrany ianao amin'ny add-ons sy serivisy rehetra dia azonao atao tsara ny mahatratra ny vidiny mitovy amin'izany Tolotra YouTube Premium . Ka amin'izany lafiny izany, raha mihevitra ny fandoavam-bola feno amin'ny Sling TV sy YouTube TV ianao, dia manome vola mitentina tsara kokoa ho anao ny YouTube TV.
4. Fifanarahana fitaovana
Nanjary fenitra ho an'ny fampiharana mivantana mivantana ny fifanarahana iraisana. Noho izany, samy misy ny Sling TV sy YouTube ho an'ny Smart TV, FireSticks, Roku, Smartphone, Tablets, ary fitaovana hafa mitovy amin'izany.
Na izany aza, ny Sling TV dia tsy miasa amin'ireo console lalao, raha YouTube TV kosa dia miasa tanteraka amin'ireo fitaovana ireo. Mandresy indray ny fahitalavitra YouTube amin'ny fifaninanana.
Raha ny tsikera iray manontolo dia toa toa mpandresy mazava ny YouTube TV, saingy raha tsy afaka mampiasa vola amin'ny fonosana premium ianao. Sling TV dia mora vidy kokoa sy mora vidy, indrindra fa miaraka amin'ireo serivisy maimaimpoana. Noho izany, raha tsy te hampiasa vola be amin'ny serivisy premium ianao dia safidy tsara kokoa ny Sling TV.
Na izany aza, raha tena te hampiasa vola sy hahazo serivisy premium misy endri-javatra manankarena ianao dia tokony hataonao lohalaharana ny fahitalavitra YouTube. Mandresy ny fahitalavitra YouTube amin'ny fanangonana fantsona, atiny ary fahaiza-manao ‘kolikoly’ raha atambatrao ny fonosana Sling TV rehetra amin'ny YouTube.
Raha mbola tsy azonao antoka ianao dia azonao atao foana ny manandrana ny kinova andrana azy roa ary mametraha fampahatsiahivana alohan'ny hamaranana ny fitsaharana. Io dia hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa.
fampiharana Amazon amazon ho an'ny birao
fampiharana youtube amin'ny mp3 android 2016
tranokala fandefasana sarimihetsika azo antoka amin'ny Internet
fety netflix misy antso an-tsary
mijery sarimihetsika an-tserasera tsy misy alaina